पहिले कस्ति थिइन् अहिले यस्ति भइन, नेपाली नायिकाको अहिले यो हाल ,कठै बिचरा ! (हेर्नुहोस् भिडियो ) – Ap Nepal
पहिले कस्ति थिइन् अहिले यस्ति भइन, नेपाली नायिकाको अहिले यो हाल ,कठै बिचरा ! (हेर्नुहोस् भिडियो )
नेपाली कला क्षेत्रमा ज’म्दै गरेको एउटा नाम हो निशा घिमिरे । कुनै बेला कलाकारितामा उच्च शिक्षाको क्रममा भा’रतमा सवारी दु’र्घटनामा परेकी उनको उपचार राम्रो’सम्ग भइरहेको छैन । उपचारको अ’भावले उनका यो अवस्थामा पुगेको चलचि’त्रकर्मी दीपक राज पाठकले सामाजिक सञ्जालमार्फत जान’कारी गराएका छन् ।
उनी लेख्छन्, ‘केही दिन पहिले पहिलो पटक टिकट’कमा उहाँको यस्तो ना’जुक अवस्था देख्दा आँसु रोकिए’न मेरो ! निशाको परिवारको आर्थिक अवस्था ना’जुक भएका कारण सक्ने सवैमा सहयो’गको लागि हार्दिक अ’पिल गरिएको छ । सहयोगका लागि मोडल निशाका बुवालाई सिधा स’म्पर्क प्रेम प्रसाद घिमिरे ९८५१२३८९५२ मा गर्न सक्नुहुन्छ । उनको शिघ्र स्वास्थ्य लाभका भगवान् पशुप’तिनाथ सँङ्ग यहि प्राथना गर्दछु !
करिब चार बर्ष पहिलेको यो अन्तर्वारता हेर्नुहोला।
यो पनि, आन्त’रिक राजश्व कार्यालयबाट बन्दाबन्दीको समयमा बीस जनाले घरमा बसेर पान नं. लिएका छन् । बन्दाबन्दीका कारण हिँड्डुल गर्न नपाएका, व्यापार व्य’वसायका लागि अति आवश्यक परेका व्यक्तिले घरमा बसेर इन्टरनेट’मार्फत पान नं लिएका हुन् ।
कार्याल’यको वेबसाइट खोलेर आवेदन दिन सकिन्छ । आवेदकले ट्याक्स पे पोटलमा गएर आफ्ना आवश्य’क कागजात अपलोड गरी पठाएपछि कार्यालयका अधि’कृतले जाँचेर प्रमाणित भए पान नं उपलब्ध हुने सो कार्याल’यले जनाएको छ ।
बनेको पान नं पुनः सम्बन्धित व्य’क्तिको म्यासेन्जर वा इमेलमा पठाई सहयोग गरिएको कार्यालय प्रमुख नारायणप्रसाद ढकालले जानकारी दिनुभयो । तत्का’ललाई नं मात्रै चाहिने कार्यका लागि यसरी काम गरिएको छ । प्रमाण’पत्र चाहिएमा कार्यालय खुलेको समयमा आएर लैजान सकिने व्यवस्था मि’लाइएको छ ।
Prevआज बढ्यो अमेरीकि डलरको भाउसँगै यी देशका मुद्राको भाउ
Nextमेरो बच्चा मैले कसरी बचाउनु ,पिलाउने दूध पनि छैन, आमा रु:दै मिडियामा (हेर्नुस् भि; डियो सहित )
ग्वा-ग्वा रु”दैं श्रीमान आए मि, डियामा, भन्छन्:- यस्तो श्रीमती त श,त्रुलाई पनि नपरोस भन्छन् श्री,मान (भि,डियो सहित)
आजको राशिफलः बि.स.२०७७ साल मंसिर १६ गते मगंलबार इश्वी सन २०२० डिसेम्बर १ तारीख